युएस थोकको लागि सुरुnelको अन्त्यमा एउटा बत्ती? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक अक्टोबर 23, 2020 डिसेम्बर 16, 2020 थोक र B2B समीक्षा अर्जेन्टिना थोक र B2B, एशिया थोक र B2B, बंगलादेश थोक र B2B, बेल्जियम थोक र B2B, ब्लग, बेलायत थोक र B2B, बुल्गारिया थोक र B2B, व्यापार, क्यानाडा थोक र B2B, चीन थोक र B2B, चेकोस्लोवाकिया थोक र B2B, डेनमार्क थोक र B2B, DR कांगो थोक र B2B, सम्पादकको पिक, इजिप्ट थोक - B2B, फ्रान्स थोक - B2B, जर्मनी थोक र B2B, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, ग्रीस थोक र B2B, ह Hongक Kong थोक र B2B, हंगेरी थोक र B2B, भारत थोक र B2B, इन्डोनेशिया थोक र B2B, इटाली पसल थोक र B2B, जापान थोक र B2B, केन्या शप ग्लोबल, मेक्सिको थोक र B2B, नाइजेरिया थोक - B2B, पाकिस्तान थोक र B2B, फिलिपिन्स थोक र B2B, रूस थोक र B2B, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रीका थोक - B2B, दक्षिण कोरिया थोक र B2B, स्पेन थोक र B2B, थाईल्याण्ड थोक र B2B, टर्की थोक र B2B, युक्रेन थोक र B2B, थोक - B2B, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
श्रम विभागका अनुसार सेप्टेम्बरमा उत्पादक मूल्य सूचकांकमा भएको बृद्धिले मुद्रास्फीति उपभोक्तामा पुग्नु अघि मापन गर्दछ जुन अगस्टमा ०. 0.3% र जुलाईमा ०..0.6 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यो आंकडा २०१ late को पछि सबैभन्दा ठूलो मासिक वृद्धि हो।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने सेप्टेम्बरको बृद्धि अर्थशास्त्रीहरूले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी थियो। बितेको बर्षमा थोक स्तरमा मुद्रास्फीति ०.%% माथि छ, जबकि खुद्रा मूल्य पनि ०.२% ले वृद्धि भएको छ। यो अवश्य पनि फेडरल रिजर्भको मुद्रास्फीति को २% को लक्ष्य भन्दा तल छ। के स्पष्ट छ मुद्रास्फीति तीव्र गतिमा छ, आर्थिक गतिविधिमा फर्कन द्वारा संचालित।
स्वाभाविक रूपमा, यो आर्थिक गतिविधि यसको चुनौतीहरु बिना भएको छैन। यिनीहरूमध्ये उच्च फ्रिक्वेन्सी इकोनॉमिक्स विवरणका प्रमुख अमेरिकी अर्थशास्त्री रुबिला फारुकी पनि “कमजोर माग र पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता” हुन्।
देशभर र विश्वभर, थोक बिक्रेताहरूले आपूर्ति प्रबन्धन, माग पूरा गर्न, नयाँ बजार र नयाँ ग्राहकहरू फेला पार्न, र लन्ड डाउन, महामारीले भरिएको अर्थव्यवस्थामा पूँजीको निम्ति सामान साट्ने कार्यहरूको सामना गर्नुपरेको छ। धन्यबाद, नयाँ उपकरण र संसाधनहरू यहाँ छन् मद्दत गर्न।
ग्लोब किन्नुहोस्, एक वैश्विक समाचार कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको नयाँ ग्लोबल अनलाइन थोक बजार आइपुगेको छ। ग्लोब शप गर्नुहोस् महँगो र अनावश्यक बिचौलिया हटाउँछ, थोक व्यापारीहरूलाई यस अनिश्चित समयमा लागत घटाउन सहयोग गर्दछ। ग्लोब किनमेल गर्नुहोस् विक्रेताहरू केवल उनीहरूले के बेच्छन् त्यसको १२% शुल्क लिन्छन्।
ग्लोब शप गर्नुहोस् विक्रेताहरु लाई सूचीबद्ध र समाचार प्रकाशन गर्न को लागी हाम्रो वेबसाइट मा कुनै अगाडि, बाहिर को जेब लागत को लागी अनुमति दिन्छ। सजिलो साइन-अप प्रक्रिया र न्यूनतम सेटअप समयको साथ, थोक बिक्रेताहरू उठ्न र छिटो द ग्लोबमा द्रुत रूपमा चाँडो गर्न सक्षम छन्।
जब हामी "ग्लोबल" भन्छौं, हामी यसको मतलब गर्छौं। द ग्लोब अपरेट गर्दछ १०० भन्दा बढी प्रमुख भाषाहरू, तपाइँ ग्राहकहरूलाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामा पुग्न अनुमति दिदै। हामी पनि प्रस्ताव मुद्राको एक विस्तृत विविधता, पूंजीका लागि सामानहरू साटासाट गर्न सजिलो। प्रत्येक अधिक को बाटो मा छन्।
ग्लोब शप हाम्रो साथमा तेस्रो साइट हो फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, र अभिभावक साइट, सांप्रदायिक समाचार। तीनै जनाले आफूलाई द्रुत रूपमा वैश्विक प्लेटफार्महरूको रूपमा स्थापित गरे, र द्रुत वृद्धि प्रदर्शन गरे, जुन हाम्रा विक्रेताहरूलाई कुनै वा कम मूल्यमा छ। जो कोहीले हाम्रो लक्षित लेखहरू साम्प्रदायिक समाचारहरूमा पढ्न सक्छन्, गुगल समाचार, वा फेसबुक समाचार।
हाम्रो सांप्रदायिक समाचार योगदानकर्ताहरूसँग समाचारका लागि नाक छ, र बजारमा गहिरो आँखा छ। सांप्रदायिक समाचार दैनिक, अप-टु-डेट-रिपोर्ट र उत्पादन र सेवाहरू, बजार र उद्योगहरूको बिभिन्न विविधतामा पूर्वानुमान गर्दछ। हामी समाचार, व्यापार, खेल र विश्लेषण पनि प्रदान गर्दछौं। हाम्रो साइट को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
मूल्यहरु माथि जान्छ, र यसको साथ मांग। ग्लोब शप गर्न दिनुहोस् नयाँ ग्राहकहरू भेट्टाउन, माग पूरा गर्न, र लागत कटौती गर्न मद्दत गर्नुहोस्। आज यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्! ग्लोबको ग्लोबल थोक विक्रेता दर्ता खरीद गर्नुहोस् नि: शुल्क छ।
सांप्रदायिक समाचार थोक बिक्री ग्लोब किन्नुहोस् थोक थोक मूल्य थोक किनमेल
फार्म सुरक्षा - युवा चोटहरूको खतरा
तपाईंको ट्रोन ड्याप प्लेटफर्म निर्माण गर्न सही तरिका